10 မျိုးဆက်သစ်များကို ဦး ဆောင်သောမျိုးဆက်များကိုချစ်မြတ်နိုးရန်အကြောင်းရင်းများ Martech Zone
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဇန်နဝါရီ ၄၊ ၂၀၁၂ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဇန်နဝါရီ ၄၊ ၂၀၁၂ အဲရစ် Quanstrom
သင် B2B အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုတွင်ပါ ၀ င်ပါက ဦး ဆောင်မှုမျိုးဆက်သည်စီးပွားရေးလုပ်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသင်အလျင်အမြန်သိရှိနိုင်သည်။ တကယ်တော့:
B62B ပညာရှင် ၆၂ ရာခိုင်နှုန်းက ဦး ဆောင်မှုပမာဏကိုတိုးမြှင့်ခြင်းသည်အဓိက ဦး စားပေးဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
သို့သော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအမြတ်အစွန်း (ROI) အမြတ်အစွန်း (သို့) အမြတ်အစွန်းရရှိရန်အတွက်လုံလောက်သော ၀ င်ငွေရရန်အမြဲမလွယ်ကူပါ။
တစ် ဦး ကဖောင်းပွ 68% စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များကခဲမျိုးဆက်နှင့်ရုန်းကန်နေရကြောင်းတင်ပြကြသည် 61% B2B စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသမားများကခဲမျိုးဆက်သည်သူတို့၏ထိပ်တန်းစိန်ခေါ်မှုဖြစ်သည်ဟုထင်မြင်ကြသည်။
ထွက်ခွာသွားသောခဲမျိုးဆက်သည်လုပ်ငန်းခွင်သို့ ၀ င်ရောက်ခြင်း၊ သင်၏အမှတ်တံဆိပ်ကိုထွက်ပေါ်လာစေခြင်း၊ သင်၏ကုန်ကျစရိတ်များကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်အရည်အချင်းပြည့်မီသော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသာရရှိခြင်းစသည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုရှေ့ရှုစဉ်းစားသောချဉ်းကပ်မှုဖြစ်လာသည်။ သင်သည်စျေးကွက်အသစ်များသို့တိုးချဲ့ရန်သို့မဟုတ်သင်၏အရောင်းအဖွဲ့ကိုထပ်မံအထောက်အပံ့ပေးရန်ကြိုးစားနေသည်ဖြစ်စေခဲသတ္တဝါများကို outsource လုပ်ရန်သင်ရှာဖွေနေရသည့်အကြောင်းရင်းများစွာရှိသည်။
ငါတို့ရပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြင်ထွက်ခဲထုတ်လုပ်မှုတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည် (သင်လုပ်နိုင်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ရှမ်ပိန်ကိုသောက်သုံးသည်!) ။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် CIENCE တွင်အပြင်ထွက်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့နှစ်သက်ရသည့်သင်၏အကြိုက်ဆုံးအကြောင်းပြချက် ၁၀ ခုနှင့်သင့်ကုမ္ပဏီ၏ ဦး ဆောင်မှုမျိုးဆက်သစ်နည်းဗျူဟာတွင်ပြင်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအနည်းငယ်သို့မဟုတ်အတော်အတန်ထည့်ခြင်းမှသင့်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်မည်သို့အကျိုးရှိနိုင်သည်ကိုဤတွင်ဖော်ပြထားသည်။
အကြောင်းပြချက် 1: Outbound အများဆုံးတိုက်ရိုက် ROI ရရှိသည်
ယနေ့စီးပွားရေးလုပ်ခြင်း၏ရှုပ်ထွေးမှုနှင့်မသေချာမရေရာမှုများကြောင့် B2B ကုမ္ပဏီများသည် ROI ကိုတိုက်ရိုက်တိုက်ရိုက်ရရန်အပြင်ထွက်သွားသောခဲမျိုးဆက်ကိုရွေးချယ်ကြသည်။ ယူနိူင်သောရလဒ်များကိုစောင့်ဆိုင်းမည့်အစား6လ 12 (သို့မဟုတ်ကြာကြာ!) မျဉ်းကြောင်းအောက်မှသင်သည်အမြန်ပြန်လာနိုင်သည် ဦး ဆောင်မျိုးဆက်ဝန်ဆောင်မှုများ outsourced အများကြီးနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်မှာ။
ဒီအချက်ကိုစဉ်းစားပါ - ယေဘုယျအားဖြင့်ပြည်တွင်းအရောင်းအ ၀ ယ်နှုန်းမြင့်မားတယ် 16%; အတင်းအဓမ္မစေခိုင်းခြင်းသည်အများအားဖြင့်ပိုမိုမြင့်မားသည် သေချာတဲ့မီး ROI သေချာစေရန်အတွင်းပိုင်းခဲမျိုးဆက်အဖွဲ့ (၎င်းတို့၏နယ်ပယ်မှကျွမ်းကျင်သူများ) ။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အပြင်ဘက် ဦး ဆောင်ထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းဗျူဟာကိုလုပ်ခြင်း၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုစဉ်းစားရန်ရပ်တန့်ပါက ROI ၏ SDR ပြင်ပ အများကြီးပိုပညာရှိဖြေရှင်းချက်ဖြစ်လာသည်။
Outsourced lead မျိုးဆက်သည်သင်နှင့်သင်လုပ်ချင်သောခေါင်းဆောင်များကို hyper-target လုပ်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သင်ဒီမှာအသုံးစရိတ်ကိုကြိုတင်သတ်မှတ်လို့ရပြီး၊ ရလဒ်များ (များသောအားဖြင့်ကျင်းပသောအစည်းအဝေးများပုံစံဖြင့်) ကိုတိုက်ရိုက်တွက်ချက်နိုင်ခြင်းကြောင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှပြန်လာမှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်ရှင်းလင်းပြတ်သားသောသင်္ချာရှိသည်။ ၎င်းသည်သင်လက်ခံနိုင်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလမ်းကြောင်း၏အသန့်ရှင်းဆုံးပုံသေနည်းဖြစ်နိုင်သည်။
အကြောင်းပြချက် 2: သင်၏အမှတ်တံဆိပ် Exposure တိုးပွားစေပါသည်
၀ ယ်သူ၏ ၈၀ ရာနှုန်းသည်ဝယ်သူ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းရှိသည်ဟုသင်သိပါသလား 2018 Google က SERP လေ့လာမှုရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၏ရလဒ်များပေါ်ထွက်လာပါစေအွန်လိုင်းထုတ်ကုန်များကိုရှာဖွေသောအခါအကျွမ်းတဝင်ရှိသောအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုကိုရွေးမည်လား။
အဆိုပါလမ်းကြောင်းသစ် B2B ဝယ်ကးအတွက်မပြောင်းပါဘူး။ ယနေ့ခေတ်လူတို့သည်ကုန်ပစ္စည်းသုတေသနနှင့်ဗဟုသုတများစွာတွင်ပိုမိုကျွမ်းကျင်မှုရှိသော်လည်းကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုသတိထားမိခြင်းကသင့်အားယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိစေပြီးသင်၏အမှတ်တံဆိပ်အပေါ်သစ္စာရှိမှုကိုတည်ဆောက်ပေးသောအရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။
Outbound ခဲမျိုးဆက် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်သင့်အားသင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုသတိပြုမိစေရန်နှင့်သင်၏အလားအလာများနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်အတွက်ကြော်ငြာနှင့်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများမှအီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်အွန်လိုင်းဆက်သွယ်ရေးအထိသင်လိုအပ်သည့်နေရာတွင်မှန်ကန်သောအပြင်ထွက်စာတိုပေးပို့နိုင်မည့်အရောင်းဖွံ့ဖြိုးမှုကျွမ်းကျင်သူများကိုပေးနိုင်သည်။ သင်၏အမှတ်တံဆိပ်ထိတွေ့မှုကိုတိုးမြှင့်ရန်အတွက်“ at-bats” ပိုမိုများပြားလာသည်။ သင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အပေါ်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ပြီးနောက်ဆုံးတွင်သင့်အားပိုမိုကောင်းမွန်သောရလဒ်များရရှိစေမည့် Grand-Slam ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်သည်။
အကြောင်းပြချက် ၃။ Multi-Channel Marketing Campaign ကိုထောက်ပံ့သည်
CIENCE ၏အရောင်း ၀ န်ထမ်းမိုက်ကယ်မန်းစ် (Michael Maynes) ၏အဆိုအရအကောင်းဆုံးအဝေးရောက်မဟာဗျူဟာသည် Multi- ရုပ်သံလိုင်းတစ်ခု။ သို့သော်ဤမျှလောက်များစွာသောရုပ်သံလိုင်းများနှင့်အတူသင်လိုချင်သောရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်အောင်မြင်သောအပြင်ဘက်စုံရုပ်သံလိုင်းစည်းရုံးမှုကိုသင်မည်သို့လုပ်ဆောင်နိုင်သနည်း။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်အမြဲတမ်းအလုပ်လုပ်နေသောရွှေရောင်လက်မှတ်ကိုအမြဲတမ်းရှာဖွေနေသည်။ သို့သော်သင်အသုံးချလိုလျှင် တော်တော်များများ သင့်ရဲ့ပစ်မှတ်ပရိသတ်ကိုရောက်ရှိရန်နှင့်ကျော်လွန်ရန်ရွှေလက်မှတ်တွေ?
ဘက်စုံရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်ခြင်းမှမဟာဗျူဟာကျသောအကောင်အထည်ဖော်မှုသည်မလွယ်ကူလှပါ။ အချိန်ကိုအထူးတလည် အသုံးပြု၍ အရင်းအမြစ်အလွန်အမင်းကြီးသည်။ ထိုအလားအလာများကိုအောင်မြင်စွာရှာဖွေရန်သင်ဂရုတစိုက်စီစဉ်ထားသောနည်းဗျူဟာများနှင့်သံစုံတီးဝိုင်းများလိုအပ်သည်။ သင့်အတွက်လေးလံသောဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်စေရန်အတွက်ပြင်ပ ဦး ဆောင်သောမျိုးဆက်သစ်မဟာဗျူဟာတစ်ခုထွက်လာသည်။
အားကောင်းတဲ့ကုန်ကြမ်းဖော်ထုတ်တဲ့ခဲမျိုးဆက်ကမင်းကိုအသုံးချနိုင်တယ် မြင့်မားသောပစ်မှတ်ထားအပြင်ထွက်လိုင်းများ ရင်းမြစ်များစွာမှဒေတာများကိုတည်ဆောက်ပြီးနောက်ထိုအရည်အချင်းပြည့်မီသောလမ်းစဉ်ကိုလိုက်ရန်လမ်းကြောင်းအသစ်များသို့အသာပုတ်ပါ။ ရလဒ်များကိုကြည့်ရှုရန်အဝင်အစောင့်ကိုစောင့်ဆိုင်းရပ်တန့်လိုပါသလား နှစ် ဦး စလုံးပါဝါကိုထည့်သွင်းမယ့် Multi- channel channel marketing အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါ။
အကြောင်းပြချက် ၄ - အဝင်ပြောင်းခြင်းကိုတိုးစေသည်
အထွက်အရောင်းအ ၀ ယ်များကိုပိတ်ပစ်ရန်အတွက်အထွက်သည်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ plays မှပါဝင်သည်ကိုသင်သိပါသလား။ တကယ်တော့တစ် ဦး အရသိရသည် 2019 CIENCE လေ့လာမှု, သိသိသာသာအတွင်း - တံခါးပိတ်အရောင်းအဝယ်၏ 17% အပြင်ဘက်ကူညီခဲ့ကြသူမြားဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှု (သို့) အီးမေးလ်မက်ဆေ့ခ်ျစသောကန့်သတ်ချက်ရှိသောဖုန်းခေါ်ဆိုမှု (သို့) အီးမေးလ်မက်ဆေ့ခ်ျစသည်တို့ဖြင့်ပစ်မှတ်ထားသောအထွက်အထောက်အကူ (သို့ပြောင်းလဲသွားသော ၀ င်ရောက်လာသည့်ရာခိုင်နှုန်း) ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုသို့မဟုတ်အီးမေးလ်မက်ဆေ့ခ်ျများဟုခေါ်သည်။
သင်၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများအကြောင်းသုံးစွဲသူများအားစကားလုံးကိုဖြန့်ဝေသည်
သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှပေးသောဖြေရှင်းနည်းများနှင့် ပတ်သက်၍ အသိပညာတိုးပွားစေသည်
သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့လာရောက်လည်ပတ်သူများပိုမိုဆွဲဆောင်သည်
သူတို့လိုမျိုးအဖြေတစ်ခုအတွက်စျေးကွက်တွင်းသို့ရောက်သောအခါသင့်အမှတ်တံဆိပ်နှင့် ပတ်သတ်၍ အလားအလာရှိသောအလားအလာများ (ဒါကို retargeting နှင့်ဆင်တူသည်ဟုထင်မှတ်) သည်အဆန်းမဟုတ်ချေ။
သင်၏ရည်မှန်းချက်အလားအလာကိုချဉ်းကပ်ရန်တိုက်ရိုက်နည်းလမ်းတစ်ခုအနေဖြင့်ပြင်ပနည်းလမ်းများသည်ပြောင်းလဲခြင်းအခွင့်အလမ်းများနှင့်အတွင်းဘက်မှ ဦး ဆောင်မှုများကိုထောက်ပံ့သည်။
အကြောင်းပြချက် ၅။ သင်၏ ICP နှင့် ၀ ယ်သူပုဂ္ဂိုလ်များကိုတိကျစွာပစ်မှတ်ထားသည်
B2B ကုမ္ပဏီများသည်ခိုင်မာသောစံနမူနာပြဖောက်သည်ပရိုဖိုင်း (ICP) ကိုတည်ဆောက်ရန်နှင့်သုံးစွဲသူပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုပစ်မှတ်ထားရန်အရောင်းသံသရာအစနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှုအစတွင်အချိန်များစွာယူသင့်သည်။ သို့သော်သင်၏အရင်းအမြစ်များအကန့်အသတ်ရှိခြင်းသို့မဟုတ်သင်၏ ဦး ဆောင်မှုမျိုးဆက်ဖြစ်စဉ်ကိုစီမံခန့်ခွဲရန်အတွက်လမ်းညွှန်ချက်များဖန်တီးရန်ကျွမ်းကျင်မှုမရှိလျှင်ကော။
ခဲမျိုးဆက်များကို outsourcing ဖြင့်သင်သည်သင်၏ ICP နှင့် ၀ ယ်သူပုဂ္ဂိုလ်များကိုအကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ရန်အရောင်းပိုင်းဆိုင်ရာထောက်လှမ်းရေးကိုအသုံးပြုသောလေ့ကျင့်သင်ကြားထားသောကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အတူသုတေသနလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအရှိန်မြှင့်နိုင်သည်။ သင်၏စီးပွားရေးသည်ဤသတ်မှတ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ ခိုင်မာသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာကိုရေးဆွဲနိုင်သည်။
အကောင်းဆုံးစံနမူနာဖောက်သည်ကိုယ်ရေးအချက်အလက် (သို့မဟုတ် ICP)) - ဤသည်မှာသင်၏နောက်လာမည့်ဖောက်သည်ဖြစ်လာရန်အရှိဆုံးကုမ္ပဏီတစ်ခုအကြောင်းအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဆိုင်ရာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးတိုင်းအတွက်အရည်အသွေးမြင့်မားသော ဦး ဆောင်မှုကိုရှာဖွေရန်အတွက်လမ်းညွှန်အဖြစ်အသုံးပြုရန်အတွက်တိကျသော ICP တစ်ခုကိုသင်ဖန်တီးသင့်သည်။
ဝယ်သူ Persona (သို့မဟုတ် BP) - ဤသည်ကသင့်အားအလားအလာရှိသော ၀ ယ်သူများကိုနားလည်ရန်နှင့်သင်၏အရောင်းဌာန၌အဆင့်တိုင်း၌ထိုခေါင်းဆောင်များနှင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဝယ်ယူမှုအလေ့အထနှင့်အပြုအမူပုံစံများနှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်များပါဝင်သည်။
Outbound lead မျိုးဆက်မှကျွမ်းကျင်သူများသည်သင်၏ဖောက်သည်များနှင့်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းကိုနက်နက်နဲနဲနားလည်သည်။ သင့်ကုမ္ပဏီ၏အချက်အလက်များမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုရန်နှင့်သင်၏ပြင်ပမဟာဗျူဟာကိုဖြည့်ဆည်းရန်အတွက်သင့်ကုမ္ပဏီအတွက်အချက်အလက်များကိုတည်ဆောက်နိုင်မည့်သုတေသနပညာရှင်များကိုသင်ရရှိလိမ့်မည်။
အကြောင်းပြချက် ၆။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူများကိုဖော်ထုတ်သည်
ဦး ဆောင်သောမျိုးဆက်သစ်ဗျူဟာတွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူများကိုရောက်ရှိခြင်းသည်ထိပ်တန်း ဦး စားပေးဖြစ်သည်။ ကောင်းမွန်သောခဲမျိုးဆက်ဆိုသည်မှာမှန်ကန်သောလူများကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်စကားပြောခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်သူတို့ကိုသင်မည်ကဲ့သို့တိကျစွာပစ်မှတ်ထားရမည်၊ မည်သည့်နေရာတွင်ရှာဖွေရမည်ကိုသင်မည်သို့သိသနည်း။ တစ် ဦး အပေါ်လူများ၏ပျမ်းမျှအရေအတွက်နှင့်အတူ 6.8 မှာအသင်းဝယ်ယူ၊ သင်ဘယ်သူ့ကိုတာဝန်ယူထားတယ်ဆိုတာကိုသင်စာဝှက်ဖေါ်နိုင်တဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေကဘာလဲ -
အတွေ့အကြုံရှိသောအပြင်ဘက် SDR သည်အဖွဲ့အစည်းများကိုမြေပုံရေးဆွဲပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချသူများကိုခွဲခြားသိမြင်နိုင်သည်။ ကောင်းမွန်သောဆိုးကျိုးနှင့်ခွဲခြားရန်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုဖြင့်ဖြစ်သည်။ အရည်အချင်းရှိသောအလားအလာများနှင့်စကားစမြည်ပြောဆိုရန် SDR ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်အရည်အချင်းပြည့်ဝသောဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သူများနှင့်ရက်ချိန်းယူနိုင်သည်၊ သင်၏အသင်း၏ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သောအချိန်ကုန်ခြင်းကိုဖယ်ရှားပေးသည်။
အကြောင်းပြချက် ၇ - စျေးကွက်အသစ်များကိုထိုးဖောက်ခြင်း
၀ င်ထွက်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းဖြင့်သင်၏ ဦး ဆောင်မှုမျိုးဆက်မဟာဗျူဟာများသည်အကြောင်းအရာများကိုကြည့်ရှုရန်တိကျသောပစ်မှတ်ထားသောပရိသတ်ရရှိရန်လှည့်ပတ်လေ့ရှိသည်။ သို့သော်အပြင်သို့ထွက်လျှင်စျေးကွက်အသစ်များကိုသင်ဆွဲဆောင်နိုင်ပြီးအရောင်းအ ၀ ယ်အသစ်တစ်ခုကိုပင်စမ်းကြည့်နိုင်သည်။
အပြင်ထွက် ဦး ဆောင်သောမျိုးဆက်သစ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစီအစဉ်သည်သင်၏ပစ်မှတ်ထားသောပရိသတ်ကိုရောက်ရှိရုံသာမကစျေးကွက်အသစ်များကိုပါပါ ၀ င်စေရန်အားကောင်းသောအခန်းကဏ္ role မှပါ ၀ င်နိုင်သည်။ အရည်အချင်းပြည့်ဝသည့်ထူးချွန်သောအပြင်ဘက်အထူးကျွမ်းကျင်သူစစ်တပ်နှင့်အတူတာဝန်ခံမှုကို ဦး ဆောင်ရန်သင်၏လူ ဦး ရေစာရင်းဇယားနှင့်ပထဝီအနေအထားနေရာများသို့သင်၏ ဦး ဆောင်မှုကိုတိုးချဲ့နိုင်သည်။
Outbound သည်စျေးကွက်အသစ်များကိုစမ်းသပ်ရန်အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးသင်စျေးကွက်မှချက်ချင်းတုန့်ပြန်မှုနှင့်သင့်လျော်စွာပြုပြင်နိုင်သည်။ သင်၏ SDR များသည်သင်၏စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးမဟာဗျူဟာတွင်မည်သည့် (နှင့်မပါ ၀ င်သည်) လုပ်ဆောင်နေသည်ကိုတန်ဖိုးရှိသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပေးနိုင်သည်။
အကြောင်းပြချက် ၈: စျေးပိုမြန်သည်
ဆက်သွယ်ရေး၊ ရုပ်မြင်သံကြားမိတ်ဖက်၊ ထုတ်ကုန် ဦး ဆောင်မှုတိုးတက်မှု (PLG) သို့မဟုတ်ကွန်ယက်အခြေပြုစျေးကွက်သို့သွားသောလှုပ်ရှားမှုများသည်အချိန်ယူရသည်။ ထိုမဟာဗျူဟာများသည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရည်မှန်းချက်များအတွက်ခိုင်မာသောအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်နိုင်သော်လည်း၎င်းတို့သည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်များစွာကြာသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်အပြင်ထွက်ခဲထုတ်လုပ်မှုသည်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကို ၀ ယ်ယူရန်အသင့်ဖြစ်နိုင်သည့်အရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်းများကို ဦး တည်ရာတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်တစ် ဦး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့စွမ်းရည် ပထမ ဦး ဆုံး - တစ်ပန်းအားသာချက် ဆုံးဖြတ်ချက်များ၏စိတ်ထဲတွင်ပစ်မှတ်အကောင့်များရှိသြဇာသက်ရောက်ခြင်းသည်အမှန်တကယ်သည်ရောင်းအားကြီးစိုးမှုနှင့်စစ်မှန်သောစျေးကွက် ဦး ဆောင်မှု၏သော့ချက်ဖြစ်သည်။ သင်၏စံပြ ၀ ယ်သူများကိုမည်သို့အစီအစဉ်နှင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုသတ်မှတ်ခြင်း သင့် သင်ကဲ့သို့သောကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုစဉ်းစားခြင်းသည်စမတ်ကုမ္ပဏီများသည်၎င်းတို့ကိုမည်သို့ခွဲခြားမည်နည်း
သင်၏အရောင်းအ ၀ ယ်ပိုများလာခြင်းနှင့်အတူသင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးတွင် ပို၍ ကြီးမားသောအရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ခြင်းဖြင့်သင်၏ရောင်းဝယ်မှုတွင်အခွင့်အလမ်းများပိုမိုများပြားလာလိမ့်မည်။ ခဲမျိုးဆက်များကို outsourcing လုပ်ခြင်းဖြင့်စျေးကွက်သို့အလျင်အမြန်သွားနိုင်သောစျေးကွက်မဟာဗျူဟာကိုသင်အာရုံစိုက်နိုင်သည်။
အကြောင်းပြချက် ၉။ သင်၏အရောင်းအဖွဲ့များကိုအောင်မြင်မှုအတွက်တည်ဆောက်သည်
သင်၏အသင်း၏အောင်မြင်မှုသည်ရောင်းအားကောင်းသည့်ပိုက်လိုင်းပေါ်တွင်များစွာမူတည်သည်။ ထိုအရည်အချင်းပြည့်မီသောအရည်အချင်းများကိုရှာဖွေရန်အရည်အချင်းပြည့်မီသော SDRs အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို outsourcing အားဖြင့်သင့်အိမ်တွင်းအရောင်းအဖွဲ့အားထိရောက်သောစွမ်းရည်နှင့်အောင်မြင်မှုတို့နှင့်အတူအဓိကတာဝန်များကိုအာရုံစိုက်ရန်ထိရောက်စွာလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးနိုင်သည်။ သင်၏ ဦး ဆောင်မှုကိုပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအားဖြင့်ရောင်းအားအခွင့်အလမ်းများကို ၂၀% ခန့်တိုးမြှင့်နိုင်သည်ဟုဆိုသည် ဝယ်လိုအားဗိုလ်ချုပ်အစီရင်ခံစာ.
ဤသည်နောက်ဆုံးတွင်အရောင်းနှင့်စျေးကွက်အကြားမိတ်ဖက်များနှင့်ယုံကြည်မှုခိုင်မာစေမည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သောပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းနှင့်အလွန်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ အရောင်းအမှုဆောင်များသည်ရှာဖွေခြင်းထက်ပိတ်ခြင်းကို ပို၍ အာရုံစိုက်သည်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များသည်သုံးစွဲကြသည် ၃၆ ရာခိုင်နှုန်းသာရှိသည် ဖောက်သည်များအားရောင်းချသောအချိန် (တစ်ပတ်လျှင် ၁၃ နာရီ) ။
ပြင်ပခေါင်းဆောင်မျိုးဆက်အဖွဲ့များသည် ဦး ဆောင်မှုဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ချိန်းဆိုခြင်းနှင့်အအေးမိခြင်းများကိုအာရုံစိုက်နိုင်သော်လည်းအိမ်တွင်းရောင်း ၀ ယ်ရေးအဖွဲ့သည်ဤအရည်အသွေးမြင့်မားသော ဦး ဆောင်မှုနှင့်ပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်များကိုပြောင်းလဲခြင်းအတွက်အချိန်များစွာကုန်ဆုံးနိုင်သည်။
အကြောင်းပြချက် ၁၀ - သင်ရိုက်ချက်တွေကိုခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်
အ ၀ င်အထွက်၊ မင်းလိုချင်တဲ့သူကိုရတယ်
Trish Bertuzzi, အဆိုပါတံတား Group မှ
ငါ့ဂါထာ Outbound lead မျိုးဆက်သည်သင်၏ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကိုပိုမိုအကျိုးရှိစေပြီးရောင်းအားတိုးတက်စေရန်အတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရပြီးစျေးသက်သက်သာသာဖြစ်ကြောင်းကုမ္ပဏီများကစတင်သတိပြုမိကြသည်။ သို့သော်ခဲမျိုးဆက်ကိုသင် outsource လုပ်သောအခါသင့်တွင်မည်မျှထိန်းချုပ်မှုရှိသနည်း။
၀ က်ဘ်ဆိုက်ဒီဇိုင်း၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာသို့မဟုတ် pay-per-click (PPC) ကြော်ငြာများကဲ့သို့သင် outsource လုပ်နိုင်သည့်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများကဲ့သို့အရည်အသွေးမြင့်မားသောခဲမျိုးဆက် ၀ န်ဆောင်မှုကိုရှာဖွေရန်သင်၏သုတေသနသည်ဤနေရာဖြစ်သည်။ မှန်ကန်သောအပြင်ထွက် ဦး ဆောင်သည့်မျိုးဆက်သစ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုရှာဖွေခြင်းဆိုသည်မှာ SDRs သည်သင်၏ရုံး၌ထိုင်။ သင့်အတွက်တိုက်ရိုက်အလုပ်လုပ်မည်ဆိုလျှင်သင်ထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မည်။
အပြင်ထွက် ဦး ဆောင်သည့်မျိုးဆက်သစ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့်သင်၏ B2B လှုပ်ရှားမှုများအားလုံးကိုကြည့်ရှု။ သင်၏ ဦး ဆောင်မှုအရည်အသွေး၏တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်မှုရှိကြောင်းသေချာစေနိုင်သည်။ သင်၏ရလဒ်များကိုသင်စစ်ဆေးနိုင်သည့်မက်ထရစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ထားသည့်အသေးစိတ်အစီရင်ခံစာများတွင်ဖော်ပြထားသည်။ သင်၏စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများမည်သို့လုပ်ဆောင်သည်၊ သင်၏အဝေးရောက်အဖွဲ့ကအောင်မြင် (သို့မဟုတ်မအောင်မြင်) ရှိပါကသင့်အားအပြည့်အ ၀ ထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မည်။ စီးပွားရေး။
Outsourcing Lead မျိုးဆက်၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုရယူပါ
အချို့သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာများသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအိမ်တွင်းအလုပ်ဖြစ်သော်လည်းသင်၏ခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့်ငွေထက်ခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့်ငွေများစေနိုင်သည့်အခြားအလုပ်များသည် SDR ကျွမ်းကျင်သူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့အားအကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်သည်။
စျေးကွက်ရှာဖွေသူများအတွက်သူစိမ်းမဟုတ်တော့ပါ၊ ခဲမျိုးဆက်များကို outsourcing သည်တန်ဖိုးရှိမှုနှင့်ကောင်းမွန်သောအကျိုးအမြတ်များရရှိသည့်စီးပွားရေး၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ဘက်ပေါင်းစုံသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းလမ်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်သင်သည်သင်၏ကုမ္ပဏီကို၎င်း၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှုအပြည့်အဝကြီးထွားလာရန်အပြင်ထွက် ဦး ဆောင်သည့်မျိုးဆက်သစ်မဟာဗျူဟာများကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
Tags: b2bb2b အပြင်ထွက်စျေးကွက်bpဝယ်သူတစ်ဦးသိပ္ပံဆုံးဖြတ်ချက်ချသူICPစံပြဖောက်သည်ပရိုဖိုင်းကိုခဲမျိုးဆက်ခဲမျိုးဆက်အပြင်ထွက်ခဲမျိုးဆက်အပြင်ထွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပြင်ပခဲ genပြင်ပခဲမျိုးဆက်ပြင်ပအရောင်းရက်ချိန်း setting ကိုSDRsdr သည်ပြင်ပလုပ်ငန်း
အဲရစ်သည်စီးပွားစွမ်းဆောင်ရှင်ဆိုင်ရာအတွေးအခေါ်ဖြင့်စတင်သောအမှုဆောင်အရာရှိဖြစ်သည်။ ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာ၊ အရောင်း၊ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ခေါင်းဆောင်မျိုးဆက်၊ လူမှုမီဒီယာ၊ အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း (SEO) အပါအ ၀ င်၊ Cloud အတွက်စီးပွားရေးစီမံကိန်း၊ SaaS နှင့် B2B software တို့တွင်ကျွမ်းကျင်မှု။ CIENCE ၏ CMO အနေနှင့် Eric သည်ကုမ္ပဏီ၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအားထုတ်မှုကို ၀ ယ်သူအသစ်ခရီးစဉ်နှင့်ပါ ၀ င်သည့်အပြင်အပြင်မဟာဗျူဟာများကိုပါအာရုံစိုက်သည်။